Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » J&J COVID Booster Vaccine dia mahazo jiro maitso
Johnson & Johnson dia nanambara fa ny Komitin'ny Mpanolo-tsaina momba ny Fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina (CDC) amerikana momba ny fanao amin'ny vaksiny (ACIP), dia nanoro ny vaksiny COVID-19 ho mpanentana ho an'ny olona rehetra mendrika izay mahazo vaksiny COVID-19.
"Ny tolo-kevitra anio dia manohana ny fampiasana ny vaksinin'ny Johnson & Johnson COVID-19 ho toy ny booster ho an'ny olona mendrika any Etazonia na inona na inona vaksininy raisiny voalohany", hoy i Paul Stoffels, MD, filoha lefitry ny komity mpanatanteraka sady Lehiben'ny tompon'andraikitra siantifika ao amin'ny Johnson sy Johnson. "Ny vaksinin'i Johnson & Johnson dia nanome fiarovana 94 isan-jato tany Etazonia amin'ny COVID-19 rehefa nomena ho mpanentana taorian'ny vaksiny Johnson & Johnson tifitra tokana, ary noho ny fomba fiasany manokana, dia manome fiarovana maharitra sy maharitra. Matoky hatrany izahay amin'ny tombontsoa atolony ho an'ny olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao. ”
Ny vaksinin'ny Johnson & Johnson COVID-19 dia natolotra ho mpanentana ho an'ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra izay nahazo ny vaksiny tokana Johnson & Johnson roa volana talohan'izay. Ny dosie booster amin'ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 dia natolotra ihany koa ho an'ny olon-dehibe mendrika enim-bolana farafahakeliny aorian'ny fatra faharoa amin'ny vaksiny mRNA nahazo alalana.
Ny tolo-kevitry ny ACIP dia nalefa tany amin'ny Talen'ny CDC sy ny Departemantan'ny Fahasalamana sy ny Sampan-draharahan'ny olombelona (HHS) amerikanina mba hojerena sy horaisina.
Ny vaksiny COVID-19 fatra tokana an'ny Orinasa dia nahazo fanomezan-dàlana ho an'ny fampiasana vonjy taitra FDA ho an'ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra tamin'ny 27 Febroary 2021. Tamin'ny 20 Oktobra 2021, ny FDA dia nanome alalana hampiasa vonjy maika ny tifitra fanamafisam-peo amin'ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19. ho an'ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra, fara fahakeliny, roa volana aorian'ny vaksiny voalohany amin'ny vaksinin'ny orinasa tokana.
Fampiasana nahazoana alalana
Ny vaksinin'ny Janssen COVID-19 dia nahazo alalana hampiasaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny fampiasana vonjy taitra (EUA) ho an'ny fanefitra mihetsika mba hisorohana ny Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) nateraky ny coronavirus 2 mahery (SARS-CoV-2) hanome:
• Ny fomba fanaovana vaksiny voalohany ho an'ny Vaksiny Janssen COVID-19 dia fatra tokana (0.5 mL) omena ny olona 18 taona no ho miakatra.
• Dosis tokana mampiroborobo vaksinina Janssen COVID-19 (0.5 mL) azo atao mandritra ny 2 volana farafahakeliny aorian'ny fanaovana vaksiny voalohany ho an'ny olona 18 taona no ho miakatra.
• Ny fatran'ny vakisiny Janssen COVID-19 (0.5 mL) dia azo omena ho fatra fanamafisam-peo heterologous aorian'ny fahavitan'ny vakisiny voalohany miaraka amin'ny vaksiny COVID-19 hafa nankatoavina. Ny isan'ny mponina mendrika sy ny elanelam-pamokarana ho an'ny fatra heterologous booster dia mitovy amin'ireo nahazo alalana amin'ny fatran'ny vaksiny ampiasaina amin'ny vaksiny voalohany.
INFORMATION SAFETY manan-danja
INONA NO TOKONY HITENY AMIN'NY mpanome vaksiny anao alohan'ny handraisanao ny vaksiny JANSSEN COVID-19?
Lazao amin'ny mpanome vaksiny ny toe-pahasalamanao rehetra, ao anatin'izany raha:
• voan'ny allergy
• voan'ny tazo
• voan'ny aretin-dra na mihamaizina noho ny rà
• voan'ny immunocompromised na eo amin'ny fanafody izay misy fiantraikany amin'ny hery fiarovanao
• bevohoka na mikasa ny ho bevohoka
• nahazo vaksiny COVID-19 hafa
• efa torana niaraka tamin'ny tsindrona
IZA NO TSY TOKONY HANAO VACCINE COVID-19 JANSSEN?
Tsy tokony hahazo ny Vaksiny Janssen COVID-19 ianao raha:
• nisy fanehoan-kevitra mahery vaika taorian'ny fatrany teo aloha tamin'ity vaksiny ity
• nisy fanehoan-kevitra mafy momba ny akora rehetra amin'ity vaksiny ity.
AHOANA NO OMENA NY VACCINE COVID-19 JANSSEN?
Ny vaksinin'ny Janssen COVID-19 dia homena anao ho tsindrona amin'ny hozatra.
Vaksiny voalohany: ny vaksinin'ny Janssen COVID-19 dia omena toy ny fatra tokana.
• Dosis tokana mampiroborobo ny Vaksinin'ny Janssen COVID-19 dia azo omena farafahakeliny roa volana aorian'ny fanaovana vaksiny voalohany amin'ny Vaksinin'ny Janssen COVID-19.
• Dosis tokana fanamafisana ny vaksinin'ny Janssen COVID-19 dia azo omena olona afaka manao vaksiny voalohany amin'ny vaksinin'ny COVID-19 hafa nahazo alalana na nekena. Azafady, diniho amin'ny mpitsabo anao momba ny maha-ara-dalàna sy ny fotoanan'ny dosie booster.
INONA NO ATAO AMIN'NY VACCINE COVID-19 JANSSEN?
Ny voka-dratsiny izay notaterina tamin'ny Vaksiny Janssen COVID-19 dia ahitana:
• Fihetseham-po amin'ny tsindrona: fanaintainana, mena ny hoditra ary fivontosana.
• Ny voka-dratsiny ankapobeny: aretin'andoha, reraka be, aretin'ny hozatra, maloiloy, tazo.
• Nivonto ny lymph node.
• Ra mivaingana.
• Fihetseham-po tsy mahazatra eo amin'ny hoditra (toy ny fihetsehana na fahatsapana mandady) (paresthesia), fihenan'ny fahatsapana na fahatsapana, indrindra amin'ny hoditra (hypoesthesia).
• Mampaneno mafy ny sofina (tinnitus).
• Aretim-pivalanana, mandoa.
Fihetseham-po mahazaka mafy
Misy ny vintana lavitra fa ny Vaksiny Janssen COVID-19 dia mety hiteraka fanehoan-kevitra mahazaka. Ny fanehoan-kevitra mahery vaika dia matetika mitranga ao anatin'ny minitra vitsy ka hatramin'ny adiny iray aorian'ny nahazoana fatra amin'ny Vaksin'i Janssen COVID-19. Noho izany antony izany, ny mpanome vakisiny anao dia mety hangataka anao hijanona eo amin'ny toerana nahazoanao ny vaksiny ho fanaraha-maso aorian'ny fanaovana vaksiny. Ny famantarana ny fanehoan-kevitra mahazaka mafy dia mety ahitana:
• Sarotra ny miaina
• Mamontsina ny tavanao sy ny tendanao
• Fitemponam-po haingana
• Fikororohana mafy manerana ny vatanao
• Fanina sy fahalemena
Mitondrà rà miaraka amin'ny platelets ambany
Nitranga tamin'ny olona sasany nahazo ny Vaksin'i Janssen COVID-19 ny fivontosana misy lalan-drà ao amin'ny ati-doha, ny havokavoka, ny kibo ary ny tongotra miaraka amin'ny platelets ambany (sela manampy ny vatanao hampitsahatra ny rà). Ao amin'ny olona voan'ny aretim-po sy ny tahan'ny platelets ambany, ny soritr'aretina dia nanomboka teo amin'ny iray na roa herinandro taorian'ny vaksiny. Ny fitaterana an'izany momba ny ra sy ny haavon'ny platelet ambany dia avo indrindra amin'ny vehivavy 18 ka hatramin'ny 49 taona. Ny vintana hitrangan'izany dia lavitra. Tokony hitady fitsaboana avy hatrany ianao raha manana ireto soritr'aretina manaraka ireto ianao taorian'ny nahazoanao vaksiny Janssen COVID-19:
• Fanaintainan’ny tratra,
• Mivonto ny tongotra,
• Fanaintainana kibo maharitra
• aretin'andoha mafy na maharitra na fahitana manjavozavo,
• Mora mangana na misy rà madinidinika ao ambanin'ny hoditra any ivelan'ny toerana nanaovana ny tsindrona.
Mety tsy ireo ihany no mety ho voka-dratsin'ny vaksinin'i Janssen COVID-19. Mety hisy fiantraikany lehibe sy tsy ampoizina. Ny vaksinin'ny Janssen COVID-19 dia mbola dinihina amin'ny fitsapana ara-pitsaboana.
Ny aretin'i Guillain Barré (fikorontanan'ny neurolojia izay manimba ny selan'ny nerveo ny hery fanefitra ao amin'ny vatana, miteraka fahalemena hozatra ary indraindray paralysis) dia niseho tamin'ny olona sasany nahazo ny Vaksiny Janssen COVID-19. Amin'ny ankamaroan'ireo olona ireo, ny soritr'aretina dia nanomboka tao anatin'ny 42 andro taorian'ny nahazoana ny vaksiny Janssen COVID-19. Kely dia kely ny mety hisian'izany. Tokony hitady fitsaboana avy hatrany ianao raha toa ka voan'ireto soritr'aretina manaraka ireto ianao taorian'ny nahazoanao ny vaksiny Janssen COVID-19:
• Fahalemena na fahatsembohana, indrindra amin'ny tongony na sandry, izay miharatsy ary miparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
• Sarotra mandeha.
• Sarotra amin'ny fihetsehan'ny tarehy, anisan'izany ny miteny, mitsako, na mitelina.
• Fahitana indroa na tsy fahafahana mihetsika ny maso.
• Sarotra amin'ny fifehezana ny tatavia na ny fiasan'ny tsinay.
INONA NO TOKONY ATAO MOMBA NY EFFECTS LAFINY?
Raha sendra fanehoan-kevitra mahazaka mafy ianao, antsoy ny 9-1-1, na mandehana any amin'ny hopitaly akaiky indrindra.
Antsoy ny mpanome vakisiny na ny mpitsabo anao raha misy voka-dratsiny manelingelina anao na tsy miala.
Tatero ny voka-dratsy ateraky ny vaksinin'ny rafitry ny tatitra momba ny vaksinin'ny FDA / CDC (VAERS). Ny laharana tsy andoavam-bola VAERS dia 1-800-822-7967 na tatitra amin'ny Internet amin'ny vaers.hhs.gov. Ampidiro azafady ny "Vaksina Janssen COVID-19 EU" ao amin'ny andalana voalohany amin'ny boaty #18 amin'ny taratasy tatitra. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mitatitra ny voka-dratsin'ny Janssen Biotech Inc. amin'ny 1-800-565-4008.
AFAKA MAHAZO NY VAKSINY JANSSEN COVID-19 MITOVY AMIN'NY VACCINE HAFA?
Ny angon-drakitra dia tsy mbola natolotra tamin'ny FDA momba ny fitantanana ny Vaksiny Janssen COVID-19 miaraka amin'ny vaksiny hafa. Raha mieritreritra ny handray ny Vaksiny Janssen COVID-19 miaraka amin'ny vaksiny hafa ianao, dia resaho amin'ny mpitsabo anao ny safidinao.
Mitaky porofo momba ny vaksiny COVID-19 izao i Costa Rica
Kitapo fitiliana an-trano COVID-19 an-tapitrisany no tsaroana tany Etazonia
Sidina New York JFK mankany Lisbon amin'ny TAP Air Portugal izao
Nisokatra indray ny Isiraely ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena
Niparitaka ny rotaka mahery vaika COVID-19 avy any Guadeloupe ka...